Banyere Anyị - Inwu Star Electronic Technology Co., Ltd.
"Gbuo nchedo niile ụmụ mmadụ na akụkụ okuku ume na ahụ ike"
Hangzhou edebata Yun Industrial Co., Ltd. (Inwu Star Electronic Technology Co., Ltd.) emi odude ke Hangzhou ngalaba nke "Beijing-Hangzhou Grand Canal"; onye nke ụwa omenala nketa nke nwere a afọ 2,500 akụkọ ihe mere eme.
The ala ebe nke factory ewe ihe 12,000m2; anyị a ụlọ ọrụ na-kpọkọtara imewe, mmepe, na mmepụta nke elu-edu ọkachamara nkpuchi nke elu-tech ụlọ ọrụ. Anyị otu nwere afọ 20 nke ahụmahụ na imewe, analysis, na-emepe emepe, mmepụta, na nnyocha na etozu ule lab; na nwere elu akpaaka ngwá maka nkpuchi mmepụta. Anyị na usoro akara sochiri ISO 9001 quality usoro; nke-hụ na nditịm gburu anyị mmepụta ke ọ bụla nzọụkwụ iji mee ka na-agbanwe agbanwe àgwà nke nkpuchi.
Anyị na ngwaahịa-esoriri na ọkọlọtọ dị ka; NIOSH, OA EN149: 2001 + A1: 2009, China GB2626 chọrọ.
Anyị na-ana ndị "Innovative, High-Ogo, na oru oma-Service" echiche nke echiche, na-eme unremitting mgbalị izute ahịa chọrọ, ma rụọ ọrụ ọha na eze ahụ ike na nchekwa echiche, iji nweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ike na-elekọta mmadụ mkpa nke gburugburu ebe obibi nchebe.
Niosh N95 Nri mkpuchi , N95 Dust Mask with Valve , N95 Cup ekara ume , N95 Rating Mask , N95 cone Ọdịdị Na valvụ , N95 Ewepụghị n'ogige atụrụ nkebisi ume ,